भीम रावललाई ओलीको जवाफ- ‘सर्वोच्च गएर साेध्नु म कुन पार्टीकाे हाे ? – www.agnijwala.com
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहाल नेपाल समूहका नेतालाई सर्वोच्च अदालतमा गएर कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हो भनेर सोध्न आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भीम रावलको नाम नलिएरै उनलाई जवाफ फर्काएका हुन् । रावलले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अब प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
रावललाई जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो जानकरी पाउँ रे । सर्वोच्च अदालत जाउ कुन पार्टीको हो भन्ने जानकारी लिन ।’ उनले उल्टै रावललाई प्रश्न गरे, ‘मैले उहाँहरुलाई सोध्छु तपाईं कुन पार्टीको हो ? मलाई साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नु भएको थियो । अदालतले भनेको पनि नसुन्ने । देख्नै नसक्ने, देख्नै नखोज्ने, सुन्नै नखोज्ने ।’